Fikarohana momba ny firaisana Ny mpitsabo fanahy: tantaram-piainana Tantaran'ny ady lehibe mpanohitra an'i James Huston, Jr. | James Leininger - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ny mpitsabo fanahy: tantaram-piainana Tantaran'ny ady lehibe mpanohitra an'i James Huston, Jr. | James Leininger
Anarana: Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany
Mpikaroka: Bruce sy Andrea Leininger, horonan-tsary omena etsy ambany
Article by: Walter Semkiw, MD avy amin'ny ateraka indray
Zavamaniry fanahy ô: tantara iainana taloha
Avy amin'ny fonon'ny anatiny Soul Survivor: "Ity boky ity dia mampiseho ny sary manaitra avy amin'i James Leininger izay maneho ny fahatsiarovana tsy azo hozongozonina, sary izay maneho ny Zavatra tsy dia lehibe loatra teo amin'ny tanora James sy ny olon-dehibe James Huston, ary ny fivoahana avy amin'ny manam-pahaizana malaza taloha taloha Carol Bowman.
Ao amin'ny SOUL SURVIVOR, ny mpamaky dia hahafantatra sy hino ilay zaza manokana izay misakana ny fanahin'ny olona iray maty tamin'ny 1945. "
Ny tantaran'i James Leininger dia niseho tamin'ny fikarohana nandritra ny efa-taona nataon'ny ray aman-dreniny, Bruce sy Andrea. Ho an'i Bruce, ity dia nahitana tolona manokana, satria ny fiheverana fa ny zanany lahy dia ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray ao amin'i James Huston, Jr. dia nifanohitra tamin'ny zavatra ninoany tena kristiana. Eny tokoa, ny iray amin'ireo lafiny mahaliana indrindra amin'ny tantaran'i Leininger dia ny fijoroana vavolombelona ny fiovam-pon'i Bruce avy amin'ny Kristiana mpandala ny nentin-drazana, evanjelika, ho kristiana nanaiky ny fanambadiana vatana vaovao ho zava-misy.
Ady Lehibe iray hafa an'ny WWI II miaraka amin'ny fiaraha-monina sivily
Me 264 V 1, Fernbomber, Mpamangy. Werkfoto Messerschmitt (MBB) 6 / 264
Amin'ny maha-zazalahy azy, i James Leininger dia nahatsiaro ny fiainany taloha ho toy ny mpanamory fiaramanidina Amerikanina maty tamin'ny ady tamin'ny Ady Lehibe II. Ity tranga ity dia mitovitovy amin'ny tranga Carl Edon, tovolahy kely tany Angletera izay nahatadidy ny fiainana lasa mpanamory fiaramanidina nazia antsoina hoe Robert izay maty tamin'ny baomba nipoaka tany Angletera. Amin'ireo tranga roa ireo, ny ankizy kely dia nanana fahalalana voajanahary momba ny fiaramanidina Ady Lehibe Faharoa ary ny razan'izy ireo kristiana sy tsy mino izay no mpikaroka voalohany.
Ny mpanamory fiaramanidina Robert-Nazi | Ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao nataon'i Carl Edon dia mampianatra fa mampiseho izany fa ny fanahy iray dia afaka manova ny zom-pirenena sy ny firazanana ara-poko avy amin'ny fahatongavany ho nofo iray hafa. Robert, mpanamory fiaramanidina an'habakabaka alemanina maty tany Angletera, dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray tamin'ny naha teratany anglisy azy. Ity tranga ity, ary koa tranga hafa momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao hafa, dia mampiseho an'izany Afaka miova ny zom-pirenena, ny fiaviana ara-poko, ary ny fivavahana, avy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa. Ity fandinihana ity dia maneho amin'ny fomba farany, ny ady dia tsy misy dikany ary mandresy tena amin'ny fomba fijery karma. Misy tranga iray mifandraika amin'izany David Llewelyn.
Nofy ratsy nataon'i James Leininger taloha momba ny fiaramanidina nirehitra
James dia teraka tamin'ny 10 aprily 1998 tamin'i Bruce sy Andrea Leininger raha mbola nonina tao amin'ny faritry San Francisco Bay izy ireo. Rehefa notolorana asa i Bruce dia manana talen'ny famatsiam-bola ho an'ny orinasan-tsolika, ny fianakaviana nifindra tany Lafayette, Louisiana, toerana hahalehibe an'i James.
Taorian'ny nahalavirany roa taona dia nanomboka nahatsiaro nofy ratsy i James izay hampiantsoantso azy tsy hatory. Tamin'ny 1 Mey 2000, fony vao 2 taona mahery i James, Andrea dia nandre ny feon'ny zanany lahy nilamina ny alina:
“Fianjerana fiaramanidina! May ny fiaramanidina! Tsy afaka mivoaka ny lehilahy kely! ” Nihazakazaka nankany amin'ny efitranony i Andrea ary nahita an'i James sahirana. "Nandry teo an-damosiny izy, nandaka sy namaky tamin'ny fonony, toa ny nanandrana nandroaka ny lalan-kaleha tao anaty vatam-paty." (1)
Ilay nofy ratsy iray dia niverimberina inefatra ka hatramin'ny in-dimy isan-kerinandro. Taorian'ny nofy ratsy dia nanamarika i Andrea:
"Nandriatra teo an-damosiny izy, nibitsibitsika ary nanapatapaka ny fonony, toy ny hoe tafahitsoka tao anaty fiaramanidina izy." Niantsoantso i James hoe: "Lozam-piaramanidina! Fiaramanidina amin'ny afo! Tsy afaka ny hivoaka ny lehilahy kely! "(2)
Rehefa nanontany i Andrea hoe iza ilay lehilahy kely teo amin'ilay fiaramanidina, namaly i James hoe: "Izaho"
Rehefa nanontany an'i James izay nitifitra ny fiaramanidina i Bruce dia nilaza hoe: "Ny Japoney." (3)
Rehefa nanontaniana izy fa fantany fa io Japone izay nitifitra ny fiaramanidina io, dia namaly i James hoe: "Ny masoandro mena lehibe." (4)
Gaga sy talanjona tamin'i Bruce sy Andrea ny fahalalan'i James momba ny fiaramanidina Ady Lehibe Faharoa Japoney, satria fantatr'izy ireo fa tsy nianatra an'io fampahalalana io izy na dia fomba mahazatra aza. Vokatr'izany, rehefa hitranga ny nofy ratsy, dia hametraka fanontaniana amin'ny antsipiriany momba an'i James ny nofiny. Rehefa nangataka ny anaran'ny olon-kafa tao anaty nofy ratsy ny ray aman-dreniny dia nilaza i James fa manana namana izay mpanamory fiaramanidina ihany koa izy, izay ny anarany dia "Jack Larsen." (5)
Rehefa mandeha ny fotoana dia ho fantatr'i Bruce sy Andrea fa i James Huston, ilay fiainana taloha nataon'i James, dia nahafantatra an'i Jack Larsen. Amin'ny farany, James kely dia hihaona amin'ity lehilahy ity izay fantany tamin'ny nofo taloha.
James Leininger tamin'ny fiainana taloha momba ny fiainana amin'ny fiaramanidina sy ny fahalalana ny fiaramanidina WW II
Ankoatry ny nofy ratsy momba ny fianjerana fiaramanidina dia nanamarika ny ray aman-dreniny fa i James dia variana tamin'ny fiaramanidina, indrindra ny fiaramanidina WW II miaraka amin'ireo sambo. Tsikaritry ny ray aman-dreniny koa fa hampidiriny ao anaty latabatra kafe ireo fiaramanidina kilalao, ka hovonoiny ireo propeller.
Tao amin'ny toeram-piasany i James no nametraka ny sofina sy ny endriky ny tarehy, toy ny hoe manomana fiaramanidina izy. Nanamboatra kamiao simba tao amin'ny efitranon'ny fianakaviana aza i James.
Nanohy naneho fahalalana tsy mahazatra momba ny fiaramanidina ihany koa izy. Ohatra, rehefa nomen'i Andrea fiaramanidina kilalao niaraka tamin'ny baomba tao ambaniny i James, dia nijery azy i James ary nilaza hoe:
"Tsy bombe izany, Mommy, izany no dwop tank." (6)
I James dia niresaka momba ny fitoeran-tsolika, nantsoina hoe "tanke de drop", izay miraikitra amin'ny ilan'ny fiaramanidina iray no avoaka ary milatsaka rehefa lany ny solika. Hoy ny ray aman-dreniny:
Ahoana no nahalalan'ity zazalahy roa taona ny atao hoe tanke mitete? Tsy nianatra an'izany tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra na ny boky novakiany izy. Ahoana no nahafantarany ny momba ny Japoney sy ny tandindon'ny fiposahan'ny masoandro, ny masoandro mena lehibe?
Ny renin'i Andrea, Bobbi, izay nieritreritra voalohany fa ny nofy ratsy nataon'i James dia mety ho avy amin'ny androm-piainany taloha. Bobbi dia nilaza tamin'i Bruce sy Andrea momba an'i Carol Bowman, mpanoratra ny Ny fiainan'ny ankizy taloha, izay nifandray tamin'ny Leiningers. Carol dia nandray anjara tamin'ny fikarohana ankizy mahatadidy ny fiainana taloha hatramin'ny 1980. Nanome torohevitra sarobidy tamin'i Bruce sy Andrea momba ny fomba fikirakirana ny nofy ratsy nataon'i James izy. Carol dia nitantara fa zava-dehibe ny fihainoana an'i James amin'ny fomba manohana sy hanomezana toky azy fa milamina izy izao.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanambara i James kely fa ilay lehilahy tao anaty nofy ratsy nofiny dia James ihany koa, nanidina fiaramanidina antsoina hoe Corsair izy, ary ny fiaramanidina nanidina dia niondrana an-tsambo ary ny anaran'ilay sambo dia ny "Natoma." Fantany fa ny Corsair dia hiala amin'ny ankavia amin'ny fiainganana ary ny Corsair dia manana fironana hanapoaka kodiarana rehefa miakatra. (7)
Ny Corsair dia manana elatra amam-borona miavaka, mba hampihenana ny haavon'ny fitaovana fitsangatsanganana.
Ho fanampin'izay, fantatr'i James fa ny fliers amerikana dia nanome anarana zazavavy mpiambina japoney ary mpiady japoney. Ohatra, nilaza i James fa ny mpiady Japoney dia nantsoina hoe Zekes ary ny baomba nantsoina hoe Bettys. (8) Tamin'ny fikarohana ireo fanambarana ireo dia talanjona i Bruce rainy nahita fa marina i James.
Raha nijery fandaharana History Channel momba ny Ady lehibe II ny fianakaviana izay nitifitra ny fiaramanidina Japoney ny Corsairs dia nilaza ny mpitantara fa ny fiaramanidina japoney nidina dia ny Zeros. I Little James dia nanitsy an'io mpitantara io tamin'ny filazany fa ny sidina Japoney dia tsy Zeros, fa Tonys. Tsy fantatr'i Bruce sy Andrea ny atao hoe Tony. Nanazava i James fa ny Tony dia mpiady izay kely noho ny Zero. Ary indray, tamin'ny famotorana dia hitan'ny ray aman-dreniny fa marina ity fanambarana nataon'ny zanakalahin'izy ireo kely ity. (9)
Tao anatin'ny volana vitsivitsy dia ho hitan'i Bruce ihany koa fa i James, fony izy mbola velona teo aloha, dia nitifitra an'i Tony.
Ny fiainana any am-piadanana: ny kely atao James dia manao safidy manidina eo amin'ny Corsair
Rehefa nentin'ny ray aman-dreniny tany amin'ny Lone Star Flight Museum izy ireo, dia gaga izy ireo nahita an'i James James nandehandeha teo amin'ny Corsair, nitarika fiarandalamby, toy ny mpanamory fiaramanidina mandeha mialoha ny fiaran'ilay fiaramanidina izay efa saika hanidina izy ireo. (10)
Nihevitra i Andrea fa ny zanany lahy dia tsy nampiofanina poti akory, kanefa fantany ny antsipirian'ny Ady Lehibe Faharoa sy ny fiaramanidina tamin'izany vanim-potoana izany. Nisokatra izy tamin'ny fahafantarana fa niaina fahatsiarovana hatramin'ny taloha i James.
Bruce Leininger, Kristianina, dia nanala tamim-pitandremana ny fahazoana ny fiainana taloha ho an'i Jakoba kely
Raha nahazo aina tamin'ny hevitra momba ny fanambadiana vatana vaovao indray i Andrea, dia tsy sahy nieritreritra i Bruce fa ny fahatsiarovan'i James dia mety nateraka tamin'ny fahatongavany ho nofo, satria nifanohitra tamin'ny finoana kristiana lalina nananany. Na izany aza dia nanomboka nandinika ny fanambarana nataon'i James kely izy. Hitan'i Bruce, ohatra, fa misy tokoa ny mpitatitra fiaramanidina Ady Lehibe Faharoa antsoina hoe Natoma Bay, izay miasa ao amin'ny Pasifika ary miseho eo ankavanana.
Nahazo boky momba ny mpitatitra fiaramanidina miasa any Pasifika i Bruce. Rehefa niara-namakivaky azy io i Bruce sy i James ary tonga tany amin'ny faritra iray tamin'ny adin'i Iwo Jima, dia nilaza tamin'ny rainy i James fa teo izy io, tao amin'ny Battle of Iwo Jima, fa voatifitra ny fiaramanidiny ary nianjera.
Fantatr'i Bruce avy eo fa ny Natoma Bay dia nanohana tokoa ny fanafihan'ny US Marine an'i Iwo Jima. Ahoana no nahafantaran'i James an'io, hoy i Bruce nanontany ny amin'ny sambo antsoina hoe Natoma ary ny Natoma dia nandray anjara tamin'ny adin'i Iwo Jima?
Mety nisy ve teto, tao anatin'ny Adin'i Iwo Jima, i James tamin'ny fiainany taloha dia niaina tsy afaka nivoaka avy tao amin'ny vala-boaloboka, izay nampiasainy ny tongony hanandrana handroaka azy, toy ny voromailala nirehitra nidina hatramin'ny ranomasina? (11)
Bruce Leininger dia mamantatra ny mombamomba ny fiainany taloha
Little James dia hanao sary ny seho ady, izay misy fiaramanidina sy baomba mipoaka mipoaka. Hanao sonia ny sariny izy, “James 3.” Naseho ireo sary ireo Soul Survivor. Nomeny anarana tsy mahazatra ny saribolany GI Joe, ao anatin'izany ny Billy, Leon ary Walter, anarana izay tsy voatonon'ireo ray aman-dreniny mihitsy, anarana izay tsy nisy an'ny naman'izy ireo. Ahoana no nifidianany ireo anarana ireo, hoy i Bruce sy Andrea nanontany tena? (12)
Rehefa nanontany ny antony nantsoiny hoe saribakoliny ireto anarana ireto, dia namaly i James hoe: "Satria io no nihaona tamiko rehefa tonga tany an-danitra aho." (13)
Na dia tsy nety nanaiky aza i Bruce fa ny fahatsiarovan'ny zanany lahy dia avy tamin'ny andro taloha, ny volan'ny fahalalana an'i James ny fiaramanidina WW II dia nahatonga azy hikaroka io fahafaha-manao io. Nikaroka tamin'ny rakitsoratra sy ny arisivan'ny tafika izy. Fantatr'i Bruce fa nanao fihaonambe ny ekipan'ny Natoma Bay. Nanapa-kevitra ny hanatrika ny iray amin'ireo fivoriana ireo izy ary nandeha tany amin'ny fihaonany Natoma Bay voalohany, natao tany San Diego tamin'ny 11 septambra 2002, herintaona taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro World Trade Center.
Tamin'ny fihaonana dia fantatr'i Bruce fa mpanamory fiaramanidina mpitatitra fiaramanidina 18 avy any amin'ny Bay Natoma no maty nandritra ny fotoam-pivavahana tany Pasifika. Ny iray tamin'izy ireo dia nantsoina hoe James Huston, Jr. Tadidio fa nilaza i James kely fa James ihany koa ny anarany, rehefa nofy ratsy izy dia voafandrika tao amin'ny paositry ny fiaramanidina mirehitra. Izy mihitsy aza no nanao sonia ny sarin'ady, James 3, izay mety manondro ny James fahatelo dia andiany iray, izany hoe, James Sr., James Jr ary James kely 3. Fantatr'i Bruce koa fa i James Huston no hany mpanamory maty tany ny fanafihana ny adin'i Iwo Jima. Huston dia maty tamin'ny 3 martsa 1945. (14)
James Leininger dia nanonona ny sarin'ny GI Joe Action Act, taorian'ny nahafatesan'ny namana taloha, ireo mpihaza maty avy any amin'ny Bay Natoma, izay niarahaba an'i James Huston tany an-danitra
Gi Joe Leininger Huston Reincarnation taloha
Hitan'i Bruce ihany koa fa Billy, Leon ary Walter no anaran'ireo mpanamory fiaramanidina Natoma Bay Navy telo izay maty talohan'i James Huston, Jr. Ny anarany feno dia Billie Peeler, Leon Connor ary Walter Devlin. (15)
Tsarovy fa niantso ny saribakoliny GI Joe i Billie, Leon ary Walter, ary nilaza izy fa miandry azy izy ireo rehefa lasa any an-danitra. Hain'ny Bruce sy Andrea fa ny lokon'ny volon'ny saribakoly tsirairay dia mifanaraka amin'ny volon'ny aviator maty. Billie Peeler manana volo mainty, toy ny saribakoly James's Billie. Leon Connor nanana volo miloko, toy ny saribakoly Leon ary Walter Devlin manana volo mena, toy ny saribakolin'i Walter James. (16)
Hitan'i Bruce i Jack Larson sy ireo mpanamory hafa avy ao amin'ny Bay Natoma izay manamarina ireo fahatsiarovana ny fiainana taloha nataon'i James
Fantatr'i Bruce ihany koa fa mpanamory fiaramanidina hafa i Jack Larsen ao amin'ny Natoma Bay. Larsen dia mbola velona ary nonina tany Arkansas. Nitsidika azy tany i Bruce. Ny fahatsiarovan'i James ny fananany namana iray antsoina hoe Jack Larsen dia voamarina ihany koa. (17)
Nahita mpanamory fiaramanidina nanatri-maso ny fiaramanidin'i James Huston i Bruce tamin'ny farany. Jack Durham, John Provost ary Bob Skelton dia nahita fa akorandriaka antiaircraft iray no nandondona ny propeller hiala ny fiaramanidin'i Huston. Izany dia nanazava ny antony hanipazanan'i James kely ny fiaramanidina filalaovany. Nanamarina ihany koa izy ireo fa may ny fiaramanidin'i Huston ary nidina niaraka tamin'ny fiaramanidiny i Huston. (18)
Hitan'i Bruce ny tsy fitoviana tao amin'ny kinova nataon'i James satria rehefa nianjera i Huston ary maty dia nanidina FMcat 2 Wildcat izy fa tsy Corsair. Taty aoriana dia fantatr'i Bruce avy amin'ny mpanamory fiaramanidina iray hafa, Bob Greenwald, fa nandray anjara tamina programa i Huston izay nosedraina Corsairs noho ny fibatana fiaramanidina mpitatitra fiaramanidina. Araka izany, marina i James kely nilaza fa nanidina Corsair izy. Greenwald dia nanamafy ihany koa fa ny Corsairs dia hihodina miankavia amin'ny fiaingana ary hanapoaka kodiarana amin'ny fidinana, sahala amin'ny nolazain'i James kely. (19)
Natoma Bay Memorial
Tamin'ny fikatsahany ny hahatakatra ny nofy ratsy an-janany, dia fantatr'i Bruce manokana ireo veterana velona niasa tao amin'ny Natoma Bay. Nianarany koa ireo tsy tafavoaka velona. Nandritra ny dingan'ny fanamarinana ny fahatsiarovana ny zanany lahy, dia nankafy fatratra ireo veterana Natoma Bay izay nanompo tamim-pahasahiana sy tamim-pitiavan-tena ny fireneny i Bruce. Azony ny fahafoizan-tena nataon'izy ireo.
Nametraka ny fihetseham-pony i Bruce tamin'ny famoronana fahatsiarovana fahatsiarovana ireo tao amin'ny Natoma Bay izay maty teo am-panaovana izany. Ity fahatsiarovana ity dia notokanana tao amin'ny tranombakoka Nimitz any Fredricksburg, Texas. Betsaka ny veteranin'ny Natoma Bay no nanatrika ity fitokanana ity. Ampitomboy ny sarin'ny fahatsiarovana amin'ny alàlan'ny fanindriana eo amboniny ary ampiasao ny bokotra zana-tsipinao raha hikorisa ambony ambany. Amin'ny sary nitarina dia azonao atao ny mamorona ny anaran'i James Huston, Jr. ao amin'ilay tsanganana eo ambonin'ilay anarana hoe Abraham Lincoln.
I Little James dia mamaritra ny Fiainam-piainana iray teo aloha tamin'ny fanekena ny Feony
Ny iray tamin'ireo olona hitan'i James tao amin'ny tranombakoka Nimitz dia i Bob Greenwald, izay fantany fa nahita ary iza no nomeny anarana tsara. Rehefa nanontany an'i Bruce i Bruce hoe ahoana no ahalalany fa i Bob Greenwald ity lehilahy ity dia nilaza i James fa nahafantatra ny feon'i Bob izy.
Tamin'ny lanonana, ny tanora James koa dia tafaraka tamin'ny sakaizany taloha, Jack Larson. Tsarovy fa tsy ela taorian'ny nanombohan'i James nanonofy ratsy dia nilaza tamin'i Bruce izy fa ny namany iray tao amin'ny Natoma dia antsoina hoe Jack Larson. Tamin'ny fanamarihana mahaliana iray, nandritra ny lanonana fahatsiarovana, i James kely dia nanao akanjo fiaramanidina mpanamory fiaramanidina kely. (20)
Ireo sakaizan'i James Huston dia mijery ny fiainana ara-batana tsy misy valaka eo amin'i James Leininger sy James Huston, Jr.
Zava-dehibe, ireo veterana tamin'ny fanokanana ny fahatsiarovana an'i Natoma Bay, izay nahafantatra an'i James Huston, Jr., dia naneho hevitra momba ny fijerin'i James Leininger kely toa ilay maty James Huston, Jr. Raha izany dia maneho tranga hafa ity izay mampiseho fa Ny fisehoana ara-batana dia mety tsy hifanaraka amin'ny fampidirana iray ao amin'ny iray hafa.
Tamin'ny fanamarihana maharary dia nahatsikaritra ny ray aman-dreniny fa toa kivy i James tamin'ny fitokanana ny fahatsiarovana. Rehefa nanontany an'i James izy ireo hoe nahoana, dia novaliany fa malahelo izy satria efa antitra be daholo ny olona. Tadidin'i James kely ny fahitan'ny mpiara-dia aminy ho tovolahy fa tsy zokiolona. (21)
Reunion miaraka amin'i Anne Barron, rahavavin'i James Leininger taloha
Andrea Leininger dia afaka nampiasa fanisam-bahoaka sy firaketana an-tsoratra hafa mba hahitana ny fianakavian'i James Huston, Jr.Nahafantatra rahavavy iray mbola velona, ​​Anne Huston Barron, nonina tany Los Gatos, Kalifornia. 84 taona i Anne rehefa nifandray taminy i Andrea. (22)
Nanangana antso an-tariby teo anelanelan'i Anne sy James kely i Andrea. Tao anatin'ity resaka ity dia fantatr'i James ny antsipiriany manokana momba ny fiainan'i James Huston, izay nohamafisin'i Anne fa marina. Ohatra amin'izany ny:
Nilaza tamin'i Anne i James fa niantso an'i Annie izy. Nanamafy i Anne fa ny anadahiny efa maty, James Huston, ihany no niantso azy hoe Annie
Nilaza tamin'i Anne i James fa nanana anabavy atao hoe Ruth izy ireo, izay marina
Nilaza i James fa efa-taona i Rota noho i Anne ary i Anne dia efa-taona noho i James, izay marina
Notaterin'i James fa toaka ny dadan'izy ireo ary nanapotika zavatra rehefa mamo izy, ary tsy maintsy niditra tao amin'ny rehab noho ny alikaola izy. Nanamafy izany i Anne.
Nilaza i James fa "maty" i Ruth, izay mpanao gazetin'ny fiarahamonina ho an'ny gazety, raha nanao asa ho an'ny ankohonan-drazana mpanankarena izay nosoratan'i Ruth ny reniny. Nanamarina ity kaonty ity i Anne.
Nilaza i James fa izy sy i Anne, amin'ny maha-ankizy azy, dia samy manana ny sariny nataon'ilay mpanakanto iray ihany, izay fanomezana avy amin'ny renin'izy ireo, izay i Daryl no anarany. Nanamafy ireo fanambarana rehetra ireo i Anne. (23)
Na ny olona tsy mino tanteraka aza dia tsy maintsy miaiky fa ny fahatsiarovana manokana toy izany dia tsy tongatonga ho azy. Raha jerena ny zava-misy marina momba an'io tranga io, i Anne, izay efa nodimandry, dia nanaiky an'i James Leininger ho teraka tao amin'ny vatana vaovao indray ny rahalahiny, James Huston, Jr., ary nalefany tany aminy ny vakoka sisa tavela tamin'ny anadahiny. Rehefa nosokafan'i James ilay boaty nalefan'i Anne dia notsofiny ilay maodely Corsair izay tao anatiny ary nilaza izy fa maimbo toy ny mpitatitra fiaramanidina io. Nanamarika fofona solika diesel nipoitra avy tao anaty boaty i Bruce. (24)
James Huston koa dia nanana fahalianana tany am-piandohana tamin'ny fiaramanidina: Fiainana taloha teo ho toy ny mpamonjy voina?
balsa modely amin'ny fiaramanidina
Ny mahaliana dia nilaza i Anne fa tia manidina i James ary na dia zazalahy kely aza dia nanao modely hazo balsa tamin'ny fiaramanidina i James Huston. Rehefa ampy taona izy dia nandeha nanidina tamin'ny biplanes i James Huston. Raha lazaina amin'ny teny hafa, toa an'i James Leininger izay nahaliana ny fiaramanidina tamin'ny fahazazany, dia toy izany koa James Huston. Mampametra-panontaniana ny hoe Huston | Leininger dia efa nisy nofo taloha izay nahatafiditra ny fiaramanidina. (25)
James Leininger dia afaka mihira toy ny James Huston: Talenta Fiainana Taloha
Tamin'ny fifandraisana manokana, i Bruce Leininger dia nahatsikaritra fa mpihira malaza i James zanany lahy, izay nanao feon'ny mozika tao amin'ny sekoliny. Nanamarika i Bruce fa na izy na ny vadiny aza dia tsy afaka mihira, saingy nahafantatra izy fa nanana feo tsara i James Huston. Araka izany dia toa hita fa nisy fanomezam-pahasoavana ho an'ny hira iray nentina avy amin'ny fampodiana ho an'ny hafa.
Fankasitrahana ny fianakaviana Leininger: Ny loka momba ny Reincarnation Research
Manana trosa betsaka amin'i James, Andrea ary Bruce Leininger izahay tamin'ny fikarohana azy momba ity raharaha ity ary nanambarany izany ampahibemaso. James tenany dia nanjary mpisolo vava ny vatana vaovao indray, araka ny tokony ho izy, nomena ny tanjaky ny raharaha fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao.
Nahasarika ny sain'ny olona ity tranga ity, satria ny ABC Primetime any Etazonia dia nitaky ampahany tamin'ny raharaha Leininger tamin'ny aprily 2004 ary fandaharana amin'ny fahitalavitra japoney iray no nitondra ny Leiningers ho any amin'ny toerana nahafatesan'i James Huston. I James kely dia nanary fehiloha avy amin'ny sambo ho any amin'ny rano izay nisy ny voromailala James Huston nidina an-dranomasina, ho fahatsiarovana ny fiainany taloha. Ity seho ity dia asongadin'ny horonantsary: Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao
Ho an'ny ezaka ataon'izy ireo, manome an'i Andrea, Bruce sy James Leininger izahay, ary ny mpanolotsainy taloha, Carol Bowman, Fampisehoana fikarohana momba ny vatana.
Alefaso amin'ity fizarana ity miaraka amin'ny teny iray avy amin'ny Soul Survivor:
"Resy lahatra i Bruce, fa fanomezana ho an'ireo mila porofo azo tsapain-tanana fa misy zavatra mihoatra ny fahafatesana, misy dikany ny fiainana… Nahatonga ny faharesen-dahatra sy ny finoana izany." (26)
Porofon'ny fisian'ny fanahy amin'ny raharaha momba ny Zandriny sy ny fampisehoana ny fiainana amin'ny fiainana Huston Leininger Case
Ankoatra ny porofo mivaingana ny fiverenan'ny vatana vaovao, dia misy tranga maromaro mifandraika amin'ny tantaran'i James izay manaporofo ny fisian'ny fanahy.
Ny iray amin'ireo tantara mampihetsi-po indrindra dia tafiditra ao amin'ny fanambarana nataon'i James izay nilazany fa nalain'i Bruce sy Andrea ho ray aman-dreny izy, raha mbola teo amin'ny tontolon'ny fanahy ny fanahin'i James kely.
Royal Hawaiian Hotel any Honolulu
Nilaza tamin'i Bruce i James fa nahita an'i Bruce sy Andrea izy ireo rehefa nanao vakansy tao amin'ny Royal Hawaiian Hotel, Honolulu. Little James niantso azy io ho "hotely mavokely lehibe" any Hawaii, izay ilay Royal Hawaiian dia.
Raha ny marina, Bruce sy Andrea dia tao amin'ny Royal Hawaiian 5 herinandro talohan'ny naha-bevohoka an'i Andrea tamin'i James. Tsy mbola nilaza tamin'i James momba ny fialan-tsasatra Hawaii ry zareo Bruce sy Andrea. Araka izany, James kely dia nahalala ny fijanonany tao amin'ny Royal Hawaiian tamin'ny fomba paranormal. Manoro hevitra aho fa ny fanahin'i James Leininger dia afaka nandinika ireo ray aman-dreniny avy any amin'ny tontolon'ny fanahy ary ny fanahin'i Andrea, Bruce ary James dia nanaiky, izay kasaina hatao mba hamoronana ny fianakaviana izay nataon'izy ireo. (27) Eny tokoa, azo inoana fa izy telo ireto dia manana fifandraisana taloha.
Reincarnation & Anniversite hetsika
Ny fisehoan'ny tsingerintaona nahaterahana dia azo jerena amin'ny fifandraisan'ny fanahy amin'ny tontolon'ny vatana. Ny fiheverana dia rehefa misy olona tonga nofo eto an-tany, dia mitohy ny fananany ny fanahy ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Ny fanahy dia mamolavola fanitarana ny tenany ho tonga nofo, holographic projections amin'ny fiaramanidina physique.
Rehefa mitranga ny fisehoan'ny tsingerintaona, dia hitantsika fa ny fanahy dia mamindra ny fampahalalana tsingerintaona ho amin'ny fahatongavany ho nofo. Raha tsy izany, ny mpitari-dalana fanahy izay miasa miaraka amin'ilay olona dia mety handrafitra ireo trangan-javatra nahatratra ny tsingerintaona.
Tamin'ny voalohany dia mety tsy azon'ny olona akory ny dikan'ilay hetsika rehefa mitranga izany. Ohatra, ao amin'ny raharaha momba ny fanambadiana indray ao amin'ny John B. Gordon | Jeff Keene, Jeff dia niaina fanaintainana mafy tamin'ny valanoranony tamin'ny daty tsingerintaona naharatran'ny tifitra basy ny valanoranon'i Gordon. Nentina tany amin'ny efitrano fitsaboana maika tany amin'ny hopitaly i Jeff, satria niahiahy izy fa voan'ny aretim-po izy. Taona vitsivitsy taty aoriana dia fantatr'i Jeff fa ny fanaintainan'ny valanoranony dia azo adika ho hetsika tsingerintaona tamin'ny fahavelomany toa an'i John B. Gordon. Hitan'i Jeff fa voatifitra tamin'ny valanoranony i Gordon fony izy 30 taona, raha i Jeff kosa dia niaina ny fanaintainan'ny valanoranony tamin'ny faha-XNUMX taonany.
Ao amin'ny Huston | Ny raharaha Leininger dia nanamarika i Bruce sy Andrea Soul Survivor fa ny nofy ratsy nofin'i James tamin'ny fahafatesan'ny fianjerana fiaramanidina dia efa nalamina nandritra ny volana maromaro. Nanantena izy ireo fa nifarana ny fizotran'ny fiainan'i James izay noforoniny nofy ratsy. Nefa tamin'ny 3 martsa 2003, nofy ratsy nofinofy hafa i James. James Huston dia maty tamin'ny adin'i Iwo Jima tamin'io andro io, 3 martsa 1945.
Raha ekena ho hetsika fitsingerenan'ny taona ity, dia ny fanahin'i James Huston | James Leininger dia nampita ny fahatsiarovan-tena tamin'i James kely momba ny maha-zava-dehibe ny 3 martsa raha natory izy. Mariho fa ity hetsika fitsingerenan'ny tsingerintaona ity dia niseho talohan'ny Bruce, tamin'ny alàlan'ny fikarohana, dia namaritra ny daty nahafatesan'i James Huston. (28)
Hetsika hafa iray hafa mety hitranga na fisehoan-javatra misy an'i Bruce, izay nandeha indroa tamin'ny fiaramanidina tamin'ny 11 septambra mba hanao fikarohana momba ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny zanany lahy. Bruce dia nanamarika ireo fifanandrifian-javatra nahatsiravina tao Soul Survivor.
Na dia kisendrasendra fotsiny aza ny mandeha indroa amin'ny 11 septambra, dia mety misy dikany amin'ity daty ity, satria ny porofon'ny fiverenan'ny vatana vaovao indray dia mety hisoroka ny fanafihana karazana 11 septambra ho avy. Araka ny voalaza etsy ambony, ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia mampiseho izany Ny olona dia afaka manova ny finoana, ny zom-pirenena ary ny fiaviana ara-poko avy amin'ny fampidirana iray hafa. Ity fahatsapana mahery vaika ity dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa.
Fanahy ary fifandraisana ara-panahy
Hetsika iray hafa izay manome porofom-pifandraisana avy amin'ny zavaboary fanahy dia misy an'i Anne Huston Barron, rahavavin'i James Huston. Anne dia nilaza tamin'i Andrea fa tamin'ny andro namonoana an'i James Huston, ny 3 martsa 1945, dia nanadio ny tranony tany California izy rehefa nahatsapa ny fisian'ny rahalahiny, James. Nanomboka niresaka taminy aza i Anne. Tadidiny tsara ilay zava-nitranga. Fantatr'i Anne andro maromaro taty aoriana fa maty ny anadahiny tamin'io ora io indrindra tany Pasifika. Araka izany, ny fanahin'i James Huston dia toa nifandray tamin'ny rahavaviny, Anne, tamin'ny fotoana nahafatesany. (29)
Toy izany koa, tamin'ny martsa 3,1945, namako iray an'ny Huston's, Lydia Eastman, nanonofy izay nankanesan'i James tany aminy ary nilaza hoe: “Te hanao veloma fotsiny aho.” Fantatr'i Lydia taty aoriana fa maty tamin'izany andro izany i James Huston. Ary hita indray fa ny fanahin'i James Huston dia nifandray tamin'i Lydia Eastman tamin'ny andro nahafatesany. (30)
Ny kaonty iray hafa dia misy an'i Jack Durham, izay niara-nanompo tamin'i James Huston ho mpanamory fiaramanidina. Voatifitra ny fiaramanidin'i Durham nandritra ny Ady Lehibe Faharoa ary rehefa nitranga izany dia very ny nifiny ary niondrika ny sorony. Ny havan'i Jack Durham dia nampandre an'ireo Leiningers fa tamin'ny andro naharatrana an'i Durham, kilometatra an'arivony maro dia henon'ny havany i Jack miantsoantso. Raha izany dia hita fa nifandray tamin'ny olon-tiany ny fanahin'i Durham. (31)
Ity toe-javatra mampihetsi-po momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao ity dia mampiseho ireo singa manaraka:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Rehefa nihaona tamin'i James Leininger ny mpikarakara sambo James Huston tamin'ny fitokanana ny fahatsiarovana an'i Natoma Bay dia naneho hevitra izy ireo momba ny fiovan'ny James kely toa an'i James Huston. Eto amin'ity pejy ity, fampitahana sary efatra amin'ny dingana samihafa amin'ny fiainana no aseho. Tranga hafa misy ny sary hita mandritra ny androm-piainana roa izay mampiseho fitoviana ara-batana:
Trangam-panjakan'olo-tokana ao Hanan Monsour Suzanne Ghanem
Trangam-panjakan 'ny Zaridaina Rashid Khaddege | Daniel Jurdi
Ny fahalalany taloha sy ny talenta: Tamin'ny zatovolahy, i James Leininger dia nahangona vola be dia be momba ny fiaramanidina WW II, izay toa miala amin'ny fiainany taloha ho toy ny mpanamory fiaramanidina WW II.
Ho fanampin'izay, i James dia naneho talenta voajanahary amin'ny fihirana, toa an'i James Huston. Mifanohitra amin'izany kosa, ny ray aman-drenin'i James dia tsy manana fanomezana amin'ny fihirana.
Fifandraisana ara-panahy amin'ny toe-java-mitaiza sy ny fandriampahalemana any amin'ny vatana: Nilaza tamin'i Bruce sy Andrea i James fa nalainy ho ray aman-dreny izy ireo rehefa tao amin'ny hotely mavokely tany Hawaii izy ireo. Eny tokoa, Bruce sy Andrea dia tao amin'ny hotely Royal Hawaiian dimy herinandro talohan'ny naha-bevohoka an'i Andrea tamin'i James. Araka izany, hita fa nandinika an'i Bruce sy Andrea i James avy tany amin'ny tontolon'ny fanahy, talohan'ny nahaterahany, ary nanao ny drafitra mba haterak'izy ireo.
Ohatra iray hafa amin'ny fanahy koa i Anne Huston Barron, rahavavin'i James Huston, izay nilaza fa nahatsapa ny fisian'ny anadahiny izy tamin'ny andro nahafatesany. Nisy fizarana toa izany koa mikasika an'i Lydia Eastman sy Jack Durham. Araka ny efa noresahina tetsy ambony, ny fisehoan'ny tsingerintaona nahaterahana dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fidiran'ny fanahy.
The James Huston, Jr. | Ny tranga James Leininger dia iray amin'ireo tranga reincarnation mahery indrindra misy. Ny porofon'ny fanahy dia omena amin'ity tranga manankarena ity. Misaotra ny fianakavian'i Leininger izahay nanao an'ity fikarohana momba ny vatana vaovao ity ary nampahafantatra izany ampahibemaso, na dia nifanohitra tamin'ny foto-pinoan'izy ireo aza izany. Maherifo ianao amin'ny fikatsahana hahafantatra ny mekanisma sy ny dikan'ny fisiana olombelona. Araka ny nomarihina teo aloha, noho ny ezaka nataonao, dia faly izahay manome anao ny: Fampisehoana fikarohana momba ny vatana
Fikambanana momba ny firaisana ara-nofo
Fandraisana an-trano momba ny vatana vaovao
1. Leininger, Bruce sy Andrea, miaraka amin'i Ken Gross, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dRajoelina tamin'ny Ady Lehibe II, Grand Central Publishing, NY, NY, 2009, p 11
2. Leininger, Soul Survivor: Ny Reincarnation an'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 47
3. Leininger, Soul Survivor: Ny Reincarnation an'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 54-56
4. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 59
5. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 79
6. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 16
7. Leininger, Soul Survivor: Ny Reincarnation an'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 109
8. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 105
9. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 239
10. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 114
11. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 91
12. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 104
13. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 156
14. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana indray tamin'ny Ady Lehibe Faharoa Fighter Pilot, p 118, 122, 132, 133
15. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 157
16. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana indray ao amin'ny Reem-fanavaozan'ny Ady Lehibe Faharoa Fighter Pilot, p 170-185
17. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 143
18. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 222
19. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 240
20. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana indray ao amin'ny Reem-fanavaozan'ny Ady Lehibe Faharoa Fighter Pilot, p 243-244
21. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 247
22. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana indray tamin'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 194, 196
23. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 236
24. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 237
25. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 197
26. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 256
27. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana indray ao amin'ny Reem-fanavaozan'ny Ady Lehibe Faharoa Fighter Pilot, p 153-154
28. Leininger, Soul Survivor: Ny fanambadiana amin'ny maty ao amin'ny Ady Lehibe Faharoa Fighter Pilot, p 256
29. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 297
30. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana indray tamin'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 198, 237
31. Leininger, Soul Survivor: Ny Fampodiana an-dohan'ny Ady Lehibe II Fighter Pilot, p 225